बि.सं. २०७४ साल साउन २९ गते आइतवारको राशिफल
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ श्रावण २९ आइतबार |
नेपाली मितिः वि.सं. २०७४ । नेपाल सं. ११३७ । योग सं. ३८ । साउन महिनाको २९ गते आइतवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१७ अगस्त महिनाको १३ तारिख ।
योगः शूल योग, १२ः१४ बजेपछि गण्ड योग ।
तिथीः वर्षा ऋतु भाद्रकृष्णपक्षको षष्ठी तिथी, १९ः४६ बजेपछि सप्तमी तिथी ।
नक्षत्रः अश्विनी नक्षत्र ।
करणः गर ०८ः३८ बजेसम्म उपरान्त वणिज करण ।
चन्द्रमाः मेष राशिमा ।
काठमाडौंमा सूर्योदयः ०५ः३४ बजे ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १८ः४२ बजे ।
राहुकालः१७ः०३ बजेपछि १८ः४२ बजेसम्म ।
यात्राः उत्तर र पूर्व दिशाको लागि उपयुक्त ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आज दिन अनुकूल रहेको छ । व्यवसायबाट धनलाभ हुने एवं भौतिक सुख शान्ति र मानप्रतिष्ठा बृद्धि हुनेछ । रोकिएर रहेको कार्य पूर्ण गर्न तथा अभिष्ट कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने छ । सामान्यतया कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवारी थपिनसक्ने छ भने सामाजिक कार्यमा सरिक हुनपाइने छ । नयाँ कार्यमा लगानीको सम्भावना पनि देखिन्छ । आज यहाँलाई एक अंक, रातो रङ्गको प्रयोग फापकर हुनेछ भने सूर्यनमस्कार साधना गर्नु तथा सूर्य भगवानलाई अघ्र्य दिनु फापकर हुनेछ ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन केही संघर्षकर रहेको देखिएको छ । अल्लि बढी कोसिसले मात्रै ईच्छित कार्यमा आंशिक सफलता मिल्नसक्ला । बहकावमा आएर कुनै पनि हल्लामा नलागेको राम्रो हुनेछ अन्यथा परिणाम विपरित पनि आउनसक्ने गोचर देखिन्छ । बुद्धिमततापूर्वक फजुलका विषयबाट पन्छिनु उपयुक्त हुनेछ । आवश्यकभन्दा बढी यात्राको पनि योग देखिएकोले संयम धारण गर्नु उचित होला । अन्यथा यात्रामा दुःख भोग्नपर्नसक्ने छ । यहाँको लागि आज ३ अंक र पहेंलो रंग एवम् भगवान रामको सेवा आराधना गर्नु शुभप्रद हुनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन आर्थिक सङ्कलन हुने गोचर परेकोले व्यवसायिक कार्यमा प्रगति हुनेछ । आफन्तजनको आगमन हुने तथा सहयोग मिल्ने हुँदा उत्साह–उमङ्ग बढ्नेछ । कामकार्यमा पनि मनग्य मन लाग्ने एवं जाँगर चल्नेछ । मानसिक क्षमताको विकास हुनेछ । गरेका कार्यले राम्रो गति लिँदा आत्मबल बढेर आउनेछ । विशेष ठाऊँको यात्रा योजना बन्न पनि सक्नेछ । विदेश यात्राको पर्खाइमा रहनेहरुको लागि पनि आज अनुकूल एवं खुशीको दिन हुनसक्ने छ भने सर्वसाधारणको लागि मानसिक शान्ति मिल्नेछ । आज यहाँले दुई अङ्क, सेतो रङ्गको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ भने लक्ष्मीमैञाको सेवा आराधना बढाउनाले कृपा पनि बढ्नेछ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन समयलाई उत्तम मान्नसकिन्छ, पदप्रतिष्ठा तथा जिम्मेवारी मिल्नसक्ने दिन परेको छ । बरिष्ट तह तथा व्यक्तित्त्वसँग संपक जोडिनसक्ने छ । लौकिक प्रख्याती र विशेष महत्त्वपूर्ण कामकार्यको अवसर प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना छ, सदुपयोग गर्नु होला । राज्यबाट लाभ उठाउनसकिने, व्यवसाय तथा उद्यमको राम्रो प्रचार–प्रसार हुने तथा राजनीति–समाजसेवामा प्रसिद्धि बढ्ने देखिन्छ । कसैकसैलाई पदप्रतिष्ठा तथा जिम्मेवारी मिल्नसक्ने पनि छ । आज यहाँलाई एक अङ्क, रातो रङ्गको उपयोग र पुरुषोत्तम भगवान रामको भक्ति आराधना गर्नु सुखप्रद हुनेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आज दिन अवमूल्यनको बाबजुतपनि केही उपलब्धि हासिल हुनेछ । माथिल्लो तहबाट अपजश एवम् दबाब आउनसक्ने सम्भावनालाई ग्रहले लक्षित गरिरहेको छ । कामकुरामा आज यहाँले अल्लि सावधानी अप्नाउन जरुरी हुनेछ । केही औपचारिक कार्यमा अल्लि व्यस्त हुनपर्ने छ । कर्मक्षेत्रमा साविकभन्दा अल्लि बढी परिश्रम गर्नुपरे पनि केही सन्देहबाबजुत पनि धार्मिक–आध्यात्मिक चिन्तन बढ्ने र धर्मकर्म सम्पादन हुनगई सदाचारले जय प्राप्त हुनेछ । ज्ञानी तथा धार्मिकजनप्रति लागेको सन्देह हट्ने तथा मार्गबोध हुनेछ । अवमूल्यनबाबजुत पनि नतिजा संतोषप्रद हातपार्न सकिनेछ । नआत्तिने र नमात्तिने गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन त्यति अनुकूल मान्न नसकिने देखिएको छ । ग्रहको प्रतिकूल अवस्थाले यहाँको स्वास्थ्यमा असर गर्नसक्ने छ । दीर्घरोगीले बढी ख्याल पुर्याउन जरुरी देखिन्छ । कार्यक्षेत्रमासंघर्ष बढ्ने तथा अबरोध सृजना हुनसक्ने सम्भावना रहेकोले होसियारी अप्नाउन जरुरी देखिन्छ । संयम नगुमाई धैर्य गर्नाले सम्भावित खतरा टार्नसकिने छ । आहारविहारमा सजगता अप्नाउनाले स्वास्थ्यकष्ट हुनबाट बच्न सकिएला । आठ अंक, रातो रङ्ग आज यहाँको लागि उपयुक्त रहनेछ भने भगवान महाकालेश्वरको वा आफ्नो इष्टदेवको श्रद्धाभक्तिलाई बढाउनु विशेष हितकर हुनेछ ।
तुला राशिहुने हरुको लागि आजको दिन आमोद–प्रमोद तथा विलासवृतिको चाहना बढ्ने ग्रहगोचर परेको छ । गलतनियत भएको विपरितलिङ्गीको झमेला पर्नसक्ने खतरा पनि छ होस पुर्याउनु होला । अन्यथा पछुतो हुन सक्नेछ । व्यवसाय तर्फ उन्नति हुनाले आर्थिक सङ्कलन हुनेछ । औपचारिक कार्यक्रम आदिमा पनि सरिक हुनपाइने सम्भावना छ । यात्राको पनि योग देखिएको छ । विवाह प्रस्तावको विषयमा विशेष विचार पुर्याउन जरुरी हुनेछ । आज यहाँको लागि सात अङ्क, सेतो रङ्गको प्रयोग र कन्यालाई सेतो वस्तुको दान दिनुले सम्भावित अनिष्टजन्य दोषलाई निवारण गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागिआजको दिन अनुकूल एवम् सफल रहनेछ । अवसर तथा समयको राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गरेमा प्रतिस्पर्धामा सफलता मिल्ने छ भने स्वकार्यबाट पनि राम्रो उपलब्धि गर्न सकिने छ । जागिर लगायतका पेशाको क्षेत्रमा पनि लाभ एवम् प्रशंसा मिल्नेछ । शत्रुका विरुद्ध खरो उत्रन र गुमेको साख फर्काउन सकिने छ । आज यहाँलाई हरियो रंग, छ अंक अनुकूल रहने छ भने विपक्षिलाई रणनीतिक सम्मान गर्नाले उपयुक्त फाइदा लिन सक्नुहुने छ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन मध्यम रहेको छ । आत्मरतीको चाहना तथा बोलेर बाढो हुनखोज्ने मनोविज्ञान बढ्नाले अर्काबाट हुने मुल्याङ्कनमा तपाईँको कमजोरी फेला पर्नसक्ने छ । अर्काको निदिखोजीमा समय व्यतित हुने र आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्य अधुरो रहनसक्ने कुरालाई पनि ग्रहले देखाइरहेको छ । समयको सदुपयोग गर्न खोजेमा अध्ययनको पक्षमा भने फाइदा लिन सकिनेछ । ध्यानपूर्वक स्वकर्मक्षेत्रमा समय दिनाले दैनिकी कार्यबाट सामान्य लाभ गर्नसकिने छ । पाँच अंक, रातो रङ्गको प्रयोग यहाँको लागि शुभ हुनेछ भने भगवान सूर्यनारायणको श्रद्धाभक्ति गर्नु हितकर हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन मनमा संकोचित विचार बढ्नाले सहकर्मीसँग विवाद हुनसक्ने कुरालाई ग्रहगोचरले लक्षित गरिरहेको हुनाले संयम रहन जरुरी हुनेछ । पारिवारिक कार्यभार बढ्नसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । अभावको विषयलाई लिएर पारिवारिक असन्तुष्टिको सामना गर्नपर्न पनि सक्नेछ । आज तपाईको पक्षमा अभिमत दिने समर्थकको अभाव खट्किन सक्ने भएकोले सम्बन्धित पक्षमा सावधानी अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । धैयैधारणले नै प्रतिकूलता टार्नसकिने कुरालाई गुरु मन्त्र बनाउनु होला । आज यहाँलाई चार अंक, सेतो रङ्गको प्रयोग फापकर हुनेछ भने आमाको आर्शिवाद शुभकर हुनेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन बहुआयामिक दिन रहेको छ । समय र शारीरिक एवम् मानसिक शक्तिको भरपुर सदुयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । जोशजाँगर बढेर आउने हुनाले रोकिएर रहेको काम पूरा गर्नसकिने छ । । सहयोगीहरु जुट्ने र इष्टमित्र तथा जानपहिचानका व्यक्तिहरुबाट प्रशंसा पाइनेछ । बन्धुबान्धवबीचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ भने सहकार्यको प्रस्ताव आउनसक्ने छ । पेशागत क्षेत्रबाट यथाशक्ति आर्थिक उपार्जन गर्न सकिनेछ । आज यहाँलाई तीन अंक, हरियो रङ्गको प्रयोग फाप्नेछ भने भगवान सूर्यनारायणलाई खुशी बनाउनु थप कृपाप्रद हुनेछ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सामान्य अनुकूल देखिएको छ । वाणीदोषको संयोग पर्नसक्छ, बोलीवचनको व्यवहारमा ख्याल गर्नुहोला । व्यवसायिक कार्यमा भने प्रगति हुने देखिएको छ तथापि सन्चित धनको अपव्ययलाई भने नकार्न सकिन्न । समाजिक कार्यमा संलग्न हुने मौका मिल्नसक्ने छ । नाता–कुटुम्बिक सम्बन्धमा पनि केही सजग हुन जरुरी छ । आज यहाँको लागि दुई अंक, सेतो रंग शुभ रहने छ भने सूर्यभगवानको स्तुति तथा सूर्यनमस्कारको साधना अवलम्बन गर्नुले सम्भावित दोषलाई कम गर्न मद्दत हुनेछ ।
बि.सं.२०७५ साल श्रावण ४ गते शुक्रवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण ३ गते बिहीवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण २ गते बुधवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण १ गते मङ्गलवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल असार ३२ गते सोमवारको राशिफल
साप्ताहिक राशिफल: २०७५ असार ३१ गते आइतवार देखि श्रावण ५ गते शनिवारसम्म
बि.सं.२०७५ साल असार ३१ गते आइतवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल असार ३० गते शनिवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल असार २९ गते शुक्रवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल असार २८ गते बिहीवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल असार २७ गते बुधवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल असार २६ गते मङ्गलवारको राशिफल